Iimpawu ezizodwa zoyilo lwegraphic kwii-90s | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kwii-90s sifumana Ukuphazamiseka koyilo lwegraphic ngaloo Adobe Photoshop kunye nezinye iinkqubo eziqale ukubumba ukubonwa kweemveliso ezininzi, iimveliso kunye neenkonzo. Izixhobo ezitsha zazisasazeka kwiplanethi xa abaqulunqi behlola nabo ukuvelisa iziphumo ezona ndlela zinzima kakhulu kunzima ukuzenza.
Ukuqaqamba, umahluko wombala, kunye nemixholo ethile ichaze kakhulu loo nto ukutshona kwelanga okumangalisayo okanye la calligraphy inzima enokuthi ikhompyuter iphindaphinde ngokukhawuleza. Kukho imizekelo emininzi yazo zonke iintlobo zeempawu ezisebenzisa uyilo lwecomputer lwecomputer yokubeka isiseko sento esibhaptiziweyo kuyo ngoku.
Uninzi loyilo lwe-90 luvela ekuphazanyisweni kweenkqubo zoyilo lwedijithali kwaye abayili bafunda zonke iintlobo zeziphumo babenokwenza ngazo ezazinzima ngakumbi ukuzenza ngesandla sabo.
Ke ngaloo minyaka sabona zonke iintlobo ze iipateni eziqaqambileyo kwakunzima ukuzoba ngesandla kwaye zithathe ixesha elincinci ukwenza ngomatshini. Kwakungomzuzu wokukhuthazwa kwimixholo enxulumene nobugcisa base-Afrika kunye nase-sub-Saharan esiye sayibona kwiimpahla zempahla ezinje ngeRip Curl nabanye abaninzi.
Kwilizwe loyilo apho yonke into itshintsha phantse ngaphandle kokukwazi ukunikela ubungqina kuyo Enkosi "kulawulo lwentando yesininzi" kwi-Intanethi, evumela imithombo yempembelelo ukuba ivele naphi na emhlabeni, ziinkampani ezinkulu ezibeka isantya kancinci kunye nezo nkqubo zokusebenza ezikwaziyo ukulandela zonke iintlobo zoyilo kunye Iifom zokugxininisa uphawu.
Ishumi leminyaka apho i-Intanethi yema ngxi ukufikelela kwinkulungwane yangoku ukuba ingene ngokupheleleyo kubomi bethu kwaye ube yinxalenye yesixokelelwano.
Las iiteyiphu zevidiyo babenoyilo olukhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ukuphefumlelwa kwimixholo ye-90s yoyilo loyilo